merolagani - गत साता नेप्से र कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनेको बजार यस साता के होला?
गत साता नेप्से र कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनेको बजार यस साता के होला?
May 30, 2021 08:05 AM Merolagani
गत साता नेप्से र कारोबार रकम दुबैले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से, २८२३.४० विन्दुमा बन्द भइ नयाँ अलटाइम हाइ क्लोज बनाएको थियो। त्यसैगरी, साताको अन्तिम कारोबार दिन कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। सो दिन बजार १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको थियो।
गत साता नेप्से परिसूचक १ प्रतिशत बढेर बन्द भयो। अघिल्लो साता २७८७.१८ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, गत साता २८.२१ अंक बढेर २८१५.३९ विन्दुमा बन्द भएको छ। जुन अलटाइम हाइभन्दा ८.०१ अंक कम हो।
यस अनुसार यस साता नेप्से परिसूचक उकालो लागेमा २९५० विन्दुमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ भने ओरालो लागेमा २७०० विन्दुमा टेवा पाउने देखिन्छ।
गत साता नेप्सेको ५ दिने इएमए र २० दिने इएमए बीचको दूरी फराकिलो बन्दै गएको छ। यसले बजारमा बाइङ्ग मोमेन्टम बलियो हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
नेप्सेसँगै गत साता भोल्यूममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। गत साता दैनिक औषतमा १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। जबकि नेप्सेको २० दिने औषत भोल्यूम ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेप्सेको २० दिने औषत भोल्युमको तुलनामा दैनिक औषत भोल्यूम १००.६९ प्रतिशत बढी हो।
नेप्सेको वृद्धिलाई भोल्यूमले पनि साथ दिएका कारण बजार अहिले बलियो अवस्थामा रहेको लगानीकर्ताहरुको विश्लेषण छ।
विकास बैंक उपसमूह
गत साता दुई उपसमूहको परिसूचक ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको थियो। जसमध्ये एक हो विकास बैंक उपसमूह। गत साता सो उपसमूहको ८.४१ प्रतिशत बढेको थियो। अघिल्लो साता ३१८२.३१ विन्दुमा बन्द भएको यस उपसमूहको परिसूचक गत साता २६७.७९ अंक बढेर ३४५०.१० विन्दुमा बन्द भएको छ।
यस अनुसार यस साता सो उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेमा ३७०० विन्दुमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, ओरालो लागेमा भने ३१०० विन्दुमा टेवा पाउने देखिन्छ।
यस उपसमूहको ५ दिने इएमए र २० दिने इएमए बीचको दूरी फराकिलो हुँदै गएको छ। जसले बाइङ्ग मोमेन्टम बलियो रहेको संकेत गर्दछ।
विस्तृत प्राविधिक विश्लेषण मेरोलगानी न्यूजलेटरमा
(उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको यो विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन। लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्नु अघि आफैले थप अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।)
नेपाल टेलिकमका सिम प्रयोगकर्ताले पनि अब एसएमएसबाटै शेयर बजारकाे जानकारी लिन सक्ने
नयाँ अलटाइम हाइ बनाएको बजार, यस साता के होला?
Jun 13, 2021 07:27 AM
नयाँ अलटाइम हाइ बनाएर बन्द भएको नेप्से, यस साता के होला?
Jun 06, 2021 08:25 AM
नयाँ उचाइमा पुगेको नेप्से, यस साता के होला?
May 23, 2021 07:48 AM
गत साता एक प्रतिशत बढेको बजार, यस साता के होला?
May 09, 2021 07:58 AM
गत साता ३ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको बजारमा यस साता के होला?
Apr 25, 2021 08:27 AM
गत साता नयाँ अलटाइम हाइ रेकर्ड बनाएको नेप्से, यस साता के होला?
Apr 18, 2021 08:04 AM
अभिकर्ता संघ बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोज्योः बीमा समिति
Jun 13, 2021 08:32 PM
बीमा समितिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघलाई बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिकामा आपति जनाउदै संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ध्यानकर्षण गराउदै समितिले उक्त आरोप लगाएको हो ।
हकप्रद र खराब कम्पनीमा उचालिने लगानीकर्ता चुर्लुम्मै डुब्न सक्छन्
Jun 13, 2021 06:31 PM
आइतबार थप २ हजार ४०७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, ४६को मृत्यु
Jun 13, 2021 05:15 PM
काठमाडौं उपत्यकामा थपियो एक हप्ता निषेधाज्ञा, होम डेलिभरी सेवा सहित पाँच क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिइने
Jun 13, 2021 04:37 PM
बैंकको ब्याज तिर्न ‘करेक्सन’ भएको शेयर बजार पुनः लयमा फर्कियो, अझै बढ्ने संकेत
Jun 13, 2021 03:54 PM
नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा पुनः नयाँ रेकर्ड, ३ दर्जन कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार
Jun 13, 2021 03:37 PM